Ogaden News Agency (ONA) – OYSU-Perth oo Shirkii Labo Todobaadlaha ahaa Iskugu Timid.
OYSU-Perth oo Shirkii Labo Todobaadlaha ahaa Iskugu Timid.
Posted by ONA Admin	/ September 5, 2015
Waxaa habeenkii xalay ahaa ooy taariikhdu ahayd 04/09/2015 qabsoomay shirkii laba todobaadlaha ahaa ee Ururka Dhalinta iyo Ardayda Ogadenia (OYSU) ee galbeedka Australia, gaar ahaan magaalada Perth. Sida caadada u ah Dhalinyarada OYSU Perth waxay yeeshaan kulamo bilkasta ah ooy isku xogwaraystaan waxna iska waydiiyaan wax qabadkooda hase ahaatee Shirkan laba todobaadlaha ah ayaa ah mid ugaar ah gabdhaha OYSU Perth.
Shirkan ayaa ujeedadiisu tahay in ay gabdhuhu iska warhayaan, isku xidhnaadaan, waxna kala faa,iidaystaan maadama ooy dhalinta badankeedu yihiin dad qurbaha ku dhashay oo aqoon buuxda ama tu kufilan ulahayn dalkoodii hooyo (Ogadenia).
Waxaa sidii caadada ahayd lagu furay shirka aayado Quraan ah, kadib waxaa lagudo galay muhiimadii shirka. Waxaa qudbad aad udheer meelo badana taabanaysa kasoo jeedisay shirkan Gudoomiyaha OYSU Perth, Halganto Muwaahib Mahad. Waxay marwadu aad uga hadashay kuna dheeraatay tariikhda wadanka Ogadenia iyo Halganka loogu jiro in lagu xoreeyo.
Sidoo kale waxay dhalinta ku baraarujisay ineey wadankooda jeclaadaan caawiyaana dadkooda dhibaataysan eena haysanin fursadaha nololeed eey iyagu haystaan. Waxay sidoo kale Halganto Muwaahib ku dardaarantay isku duubni, iyo in dadaal dheeraad ah lala yimaado iyo in waxbarashada kor looqaado maadaama ay waxbarashadu tahay furaha nolosha ama xornimada lahigsanayo soo dadajin kara. Kadib waxay dhalintu iswaydaarsadeen su’aalo iyo jawaabo kusaabsan hawlaha halganka iyo sidii loo hirgalin lahaa waxqabadka dhalinyarada Somalida Ogadenya.
Ugu danbayntii, shirkan ayaa ahaa mid aad muhiim ugu ah dhalinyarta kasoo qayb gashay maadaamo ooy ka heleen ama ka ogaadeen waxyaabo badan ayna badankoodu horay usii aqoonin. Kulankan ayaa kusoo gabagaboobay guul iyo jawi aad uquruxbadan, waana wax ka go’an Ururka OYSU ee Magaalada Perth ineey sii wadaan kulamadan noocan oo kale ah.
Muna Mahad, Perth